महानायक राजेश हमालले गरिखाऊ भनेर गरिब सुकुम्बासी लाई दिए ३ करोडको जग्गा – AB Sansar
महानायक राजेश हमालले गरिखाऊ भनेर गरिब सुकुम्बासी लाई दिए ३ करोडको जग्गा
November 1, 2020 adminLeaveaComment on महानायक राजेश हमालले गरिखाऊ भनेर गरिब सुकुम्बासी लाई दिए ३ करोडको जग्गा
काठमाडौ । महानायक राजेश हमाल पैत्रिक सम्पत्तीका कारण पनि सम्पन्नशाली छन् । सम्पन्नशाली परिवारमा जन्मिएका हमाललाई उनका बुवाले डाक्टर बनाउन चाहन्थे । तर उनी बुवाको इच्छा विपरित कलाकार बने । त्यसैले उनको बुवासंग त्यती राम्रो सम्बन्ध पनि भएन । अन्तिम अवस्थामा पनि बुवालाई राम्रो सेवा गर्न नपाएकोमा हमाललाई अहिले पनि पछुतो छ । महानायकले गरेको एउटा योगदानका कारण अहिले ४ वटा विपन्न परिवार करोडपति बनेका छन् । ****यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****
नेपाली कांग्रेसमा सकृय हमालका भाई राकेश हमालको केही समय अघि निधन भयो । उनी निधन हुनु अघि यो जमिनमा जाने गर्थे । जग्गा दान दिएकाहरुलाई पनि भेट्ने गरेका थिए । दुई वर्ष अघि मात्र हमाल परिवारले दान दिएका हुन् ।****यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****
Breaking News: कोरोनाको उपचार गाँ’जा बाट हुन सक्ने बैज्ञानिकहरुको नयाँ निष्कर्ष !
साह्रै दुखद खबर: चाउमिन खाँदा एकै परिवारका ९ जनाको मृ’त्यु, नमिठो मानेर नखाने ३ जना बचे !
भदौ १८ गते शुक्रबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल ?
अस्ट्रेलिया जाने सपना त्यागेर ‘धागोको चुरा’ सम्हाल्दै १९ वर्षीया वर्षा
February 26, 2021 Ab-संसार